Anumanu ozo | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Akụrụngwa: Ụmụ anụmanụ ndị ọzọ
gịnị mere rabbits anwụ?
gịnị kpatara oke bekee ji anwụ? a chikotara nri a…. M na-eche coccidiosis megide ndabere nke ngafe nke succulent fiidi. Osisi na ahịhịa ma ọ bụ ahịhịa akpọnwụwo, enyela kabeeji ma ọlị, chọọ coccidiostatics. Ajụjụ ga-abụ, dee n’onwe gị ...
Gwa m, olee ụdị anụmanụ ndị e depụtara na Red Akwụkwọ nke Chuvashia?
Gwa m, olee ụdị anụmanụ ndị edepụtara na Akwụkwọ Red Chuvashia? !!! Ọ bụrụ na ịchọrọ anụmanụ niile, mgbe ahụ ndị a bụ nnụnụ, na anụmanụ, na ndị amphibians, na anụ na-akpụ akpụ, na azụ, na nke a bụ ...
Kedu ihe bụ cordyceps?
Kedu ihe bụ cordyceps? ị maara egwuregwu ahụ nke ikpeazụ anyị? Ya mere, ebe ahụ na-eme ka ndị mmadụ na-eme ka mmadụ dị ndụ, na ná ndụ, ọ na-emepụta nanị ụmụ ahụhụ ma na-eme ka ha na-awagharị gaa n'anyanwụ, si otú a ...
Kedu ihe bụ saprotrophs?
Gịnị bụ saprotrophs? site na Grik. sapros rere ure na ... troph), nje heterotrophic na-eji ahịhịa maka nri. ozu ndi nwuru anwu ma obu anumanu nke anumanu. Ikere na mineralization nke organic ogige, S. bụ ihe dị mkpa ...
Dee ihe gbasara prudovik ma ọ bụ nye ọbụlagodi weebụsaịtị nke edere ihe banyere ya
Dee ihe banyere prudovik ma ọ bụ nye ọbụlagodi website nke ihe edere banyere ya Prudoviki (lat. Lymnaeidae) bụ ezinụlọ nke anụ ọkụ na-agbaghasị site na ọkụ elekere (Pulmonata). Ndị bi na mmiri ọhụrụ ...
onye marabou stork marabou # 769; (lat. Leptoptilos) bu uzo nke umu nnunu si n'ulo ezoro, nke gunyere umu ato. Nnụnụ nke marabou genus dịgasị iche na 110 ruo 150, lee ...
kedu ihe bụ ọbara ọbara?
kedu ihe bụ ọbara ọbara? Ụdị nchịkọta nkịtị aha aha. acha uhie uhie nke mgbochi anwụnta na-eru ogologo 25 mm. Ọ na-ebi na silt nke ọdọ mmiri ọdọ mmiri, ọdọ mmiri na iyi, rummaging nke ha na-ahụ onwe ha ...
Kedu ka ọnyá na-esi abanye n'ime nsị na ferns?
Olee otú mkpụrụ osisi na-eto na mosses na ferns? Ahịhịa bụ ahịhịa na-akụ mkpụrụ ndụ. Ha na-etolite na ebe udu mmiri, mgbe mgbe n'okpuru kanopi na na oke ohia. Ferns nwere karịa…
Kedu ihe ga-eri nri ahụ? Na mgbakwunye na apụl na achịcha adịghị eri ihe ọ bụla.
Kedu ihe ga-eri nri ahụ? Na mgbakwunye na apụl na achịcha adịghị eri ihe ọ bụla. Ngwurugwu na-eri nri na ụmụ ahụhụ, spiders, ikpuru, mollusks, tomato. Ya mere nke a zuru ya, ya mere ọ naghị eri. Blackbirds Thrushes bụ ọkara-sized nnụnụ, ...
Kedu ndị nautilus?
Kedu ndị nautilus? E nwere ìgwè dị otú ahụ, ugbu a Yu-Peter, ọ bụrụ na ị bụ maka ya) nautilus pompilius, otu nke nwere Vyacheslav Butusov, nke a na-ewu na 90 afọ, Ugbu a, o yiri ka ọ bụghị. e abụ na-ada ụda ...
Kedu ihe oriri obi ụtọ? Kedu ka esi gbaa ha?
Kedu ụdị chestnuts bụ nri? Esi esi eghe ha? Ee, ọ dị ha ka ha agaghị eri mmiri. na Paris a na-eme ha n’elu icheku ọkụ n’ime ogige. nụrụ ụtọ nke ukwuu poteto si na ọkụ na-echetara Edible - n'ezie, ...
Akwụsị. Ndi nnochite anya, ha nwere nku? Ha bu omnivorous?, Nke bu mkpo?
Akwụsị. Ndi nnochite anya, ha nwere nku? Ha bu omnivorous?, Nke bu mkpo? Ndị okenye enweghi ike iri nri ma ọlị, ha emeela ka ọnụ ọgụgụ ndị na-egbuke egbuke belata. E nwere nku, 2 abụọ, ọ bụ ezie na nke abụọ ...
Kedu ụmụ anụmanụ na-atụ ọbara ọbara?
Kedu ụmụ anụmanụ na-atụ ọbara ọbara? niile invertebrates, azụ, amphibians na anụ ugbo. Ọdịdị tempo-ha bụ nanị 12 C n'elu okpomọkụ ma ọ bụ hà. Ọtụtụ n'ime ha ...
Kedu aha ndị spiders nwere ogologo ụkwụ ụkwụ dị ogologo na obere obere ahụ?
Kedu aha ndị spiders nwere ogologo ụkwụ ụkwụ dị ogologo na obere obere ahụ? Haylings ma ọ bụ (Latin Opiliones, = Phalangida) nbibi nke arthropod si na klas nke arachnids. Na 2005 afọ, e nwere ihe karịrị ụdị 6 300 nke ndị na-eme egwuregwu, ...
kedu ihe bụ ntiwapụ? Nso idi oria ojoo?
kedu ihe bụ ntiwapụ? Nso idi oria ojoo? Ọrịa bụ mgbe a na-ebute ala ahụ. Na oria ojoo bu mgbe mba nile nwere oria ojoo ma o bu ihe ojoo n'uwa dum .. oria ojoo bu ihe ojoo nke uwa ...
Gini mere mmadu ji adia otutu otutu ugbo obughi anu?
Gini mere mmadu ji adi otutu otutu ugbo obughi anu? Ahia na-agba ya na ahịhịa mgbe ọ na-eriri eriri afọ wee dọpụta ya mgbe ọ nwụsịrị (ma ọ bụ ka ọ na-asụ) ihe ahụ na-ada na bitten ...
Kedu ihe na-eme ka ahumachi ahụ?
Kedu ihe na-eme ka ahumachi ahụ? ọ na-apụta site na n'okporo ámá, ọ nwere ike ịgbapụ, hapụ nsen na kape na-efe efe. Iji zere nke a, zụrụ ụdị nchebe niile site na moths. bọọlụ ihe atụ ...
Spider .. anaghị agwa m na nsi abụghị nsi ???
Spider .. anaghị agwa m na nsi abụghị nsi ??? Dị ka nsi. A na-achọta ya na mpaghara Voronezh. na Saratov. Ee, n'echiche nke m, enweghi ndị na-egbu egbu =) Ha bi na Tropics =) Fu !!!! M ga-ejide n'aka ...
mmiri dị na akwarium na-esi ísì, gbanwee, agbanyeghị. ihe ị ga-eme
mmiri dị na akwarium na-esi ísì, gbanwee, agbanyeghị. Ihe ị ga-eme Ebe mmiri dị na mmiri dị ọcha, n'ime ha n'ihi rotting hydrogen sulfide. Nke a bụ na ya pụta, na ihe nwere ike ịbụ dị ka ndị a: adịghị edozi ...
Kedu otu esi achọpụta nwa akpa akwa? ! :
Kedu otu esi achọpụta nwa akpa akwa? ! : Ma olee otu esi amata ma àkwá ọ bụ ihe efu ma hà na-atọ ụtọ? Parrots anaghị atụrụ ime, ha na-edina ma na-amị akwa. ntakịrị banyere ozuzu ozuzu ...
Ajuju 14 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,450.